Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Maanta oo ay taarikhdu tahay 04 March 2018 Waxaa uu kulan gaara xafiiskiisa kula qaatey Guddoomiye yaasha Gobolada Puntland.
Kulankan uu Madaxweynaha Dawladda Puntland uu la qaatey Guddoomiyeyaasha Gobolada ayaa waxaa qeyb ka ahaa Wasaaradda arimaha gudaha, dawladaha hoose iyo hormarinta reer miyiga oo uu ka soo qeyb galay Wasiirka Wasaaradda Mudane. Cabdulaahi Timacde iyo Wasiir ku xigeenka Wasaardda.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa kulankan uu maanta la qaatey Wasaardda iyo Guddoomiyeyaasha gobolada waxaa looga wada hadley xaalada guud ee Gobolada sida Amniga, nidaamka dawliga ah, Cashuurha, Dhaqaalaha, waxbarashada, Horumarinta, Abaaraha, xaalufka deegaanka iyo daaweynta xoolaha.
Dhinaca kale Guddoomiyeyaasha Gobolada oo warbixino kooban siiyey madaxweynaha ayaa sheegay in xaalada guud ee amniga goboladu wanaagsan yahay, balse meelaha qaar ay ka jiraan xalaad abaareed oo hada isku bedashey biyo dhaamis, gobolada sida gaarka ah ay abaaruhu u saameeyeena ay ka mid yihiin Gobolada Sanaag, Hayland, Kar Kaar iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag.
← Ciidanka PSF Puntland oo Howlgallo Ka Sameeyey Buuraha Galgala. Koonfurta Soomaaliya oo mashaariic laga fulinayo →